November 10, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Juventus oo la wareegtay hogaanka horyaalka Serie A kaddib markii ay Allianz Stadium kaga adkaatay AC Milan… +SAWIRRO
Cayaaraha November 10, 2019
(Turin) 11 Nof 2019. Juventus ayaa markale la wareegtay hogaaminta horyaalka Serie A kaddib markii ay Allianz Stadium kaga adkaatay AC Milan 1-0, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 12-aad ee horyaalka Talyaaniga. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray barbaro 0-0 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Juventus iyo AC Milan. Qeybta labaad ee ciyaarta […]Sii akhriso
Pep Guardiola oo qirtay shanta xiddig ee isaga ka dhigay macallinka ugu wanaagsan Adduunka
(Yurub) 10 Nof 2019. Pep Guardiola ayaa loo arkaa mid ka mid ah macallimiinta ugu wanaagsan kubadda cagta haatan waxa uuna leeyahay tayo maamul iyo waliba falsafad lagu raaxeysan karo sida lawada aaminsan yahay. Pep ayaa xirfaddiisa ka soo bilaabay Barcelona, kaddib waxa uu u wareegay Kooxda Bayern Munich waxaana uu hadda maamulayaa Naadiga Manchester […]Sii akhriso
(Turin) 10 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Juventus Iyo AC Milan kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Juventus Iyo AC Milan: Juventus XI: Milan XI Gool FM.Sii akhriso
Liverpool oo dheereysatay hoggaanka horyaalka Premier League kaddib markii ay Anfield ku garaacday Man City…+SAWIRRO
(Liverpool) 10 Nof 2019. Liverpool ayaa sii dheereysatay hogaanka horyaalka Premier League, kaddib markii ay kooxda Machester Ciy kaga adkaatay 3-1, kulan aad u xiiso badan oo ay ku wada ciyaareen garoonka Anfield, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada 12-aad ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa waxaa lagu kala maray 2-0 ay […]Sii akhriso
Jose Mourinho oo sheegay kooxda ku guuleysaneysa Premier League… (Ma Liverpool mise Man City?)
(England) 10 Nof 2019. Macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa ka warbixiyay kooxda xilli ciyaareedkan ku guuleysan karta horyaalka Premier League. Jose Mourinho ayaa aaminsan in Liverpool loo caleemo saari doono hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, hadii ay garaacaan Manchester City, kulanka haatna ka socda garoonka Anfeld. Mourinho oo ku gudi Sii akhriso
N’Golo Kanté oo si cad kaga hadlay mustaqbalkiisa Chelsea… (Miyuu doonayaa inuu ka tago kooxda?)
(London) 10 Nof 2019. Xiddiga khadka dhexe kooxda Chelsea ee N’Golo Kanté ayaa si cad kaga hadlay mustaqbalkiisa garoonka Stamford Bridge. N’Golo Kanté ayaa xaqiijiyay inuu ku sii negayo galbeedka magaalada London ilaa uu ka fariisanayo ciyaarista kubadda cagta. N’Golo Kanté ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay mustaqbalkiisa garoonka Stamford Bridge wuxuuna yiri: Sii akhriso
Manchester United oo garoonkeeda Old Trafford ugu awood sheegatay kooxda Brighton…+SAWIRRO
(Manchester) 10 Nof 2019. Manchester United ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Brighton & Hove Albion oo marti ugu aheyd garoonka Old Trafford, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 12-aad ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-0 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee […]Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Liverpool Iyo Man City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(Liverpool) 10 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Liverpool Iyo Manchester City kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Liverpool Iyo Manchester City: Liverpool XI: Man City XI: Gool FM.Sii akhriso
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Faransiiska Uga Qayb Gelaya Kulan Sannadeedka Madasha Nabadda Paris+Sawirro
Soomaaliya November 10, 2019
Muqdisho.(SONNA):- Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta u safray dalka Fanasiiska oo uu uga qayb gelayo shirka sannadlaha ah ee madasha nabadda Paris oo socanaya Nofeembar 11-13, 2019. Madasha nabadda Paris oo ah kulan sannadeed caalami ah, ayaa looga hadlayaa xal u helidda dhibaatooyinka ka jira daafaha caalamka. Shirka Sii akhriso
“Weligay ma luminin kalsoonidii aan ku qabay Real Madrid” – Zinedine Zidane
(Madrid) 10 Nof 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay guushii ay xalay kaga gaareen naadiga Eibar horyaalka La Liga ee dalka Spain. Real Madrid ayaa guul raaxo leh ka soo heshay kooxda Eibar oo ay booqatay, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-4, ciyaar ka tirsaneyd […]Sii akhriso